Xaalada magaalada Beledweyn ee Gobolka Hiiraan ayaa saaka caadi ku soo laabatay – STAR FM SOMALIA
Xaalada magaalada Beledweyn ee Gobolka Hiiraan ayaa saaka caadi ku soo laabatay, kadib markii odayaasha iyo waxgaradka uu hogaaminayay Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif ay ku guuleysteen inay furaan wadada laamiga ee halbowlaha u ah isu socodka magaalada.
Waxaa saaka dib u bilowday dhaq dhaqaaqii ganacsiga iyo isu socodka, waxaana shacabka ku dhaqan Beledweyn ay ku baaqayeen in nabadda la xoojiyo.
Odayaasha iyo waxgaradka ayaa dadaal ugu jiray in la soo afjaray xiisada ka taagneyd magaalada, taasoo qal qal badan iyo jahwareer ku abuurtay dadka deegaanka.
Maleeshiyadii hubeysneyd ee ka careysneyd dilkii Sarkaalkii u shaqeynayay hey’adda Mine Action ayaa lagu qanciyay inay furaan wadada laamiga aheyd ee ka xirneyd dhanka xerada daraawiishta, waxaana ay ogolaadeen inay meesha ka tagaan.
Wada hadalo xal looga gaarayo xiisada ka dhalata dilkii 14-kii bishan loo geystay sarkaalka u shaqeynayay Mine Action ayaa wali socota, waxaana la filayaa in Guddiyada ku howlan dhameynta xiisada ay war soo saaraan.
Maleeshiyada ku heybta ah sarkaalkii la dilay ayaa ka carooday markii shalay gudaha magaalada uu dib ugu soo laabtay Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan C/fataax Xasan Afrax, kadib markii uu habeen hore ku hoyday Xerada AMISOM ee duleedka Beledweyn.
Si kastaba ha ahaatee Guddiga dowladda Soomaaliya u xil saartay baaritaanka dilkii Sarkaalka u shaqeynayay Qaramada Midoobey ee maalin ka hor gaaray Beledweyn ayaa wali wax war ah ka soo bixin, walina magaalada gudaha ma aanay u soo gelin.
Madaxweynayaasha Soomliya iyo Shiinaha ayaa kulan ku qaatay dalka koonfor afrika